Degmada Beykoz waxay Soo Iibsan doontaa 50 Sarkaal oo Boliis | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaDawlada Hoose ee Beykoz waxay Soo Iibsan doontaa 50 Sarkaal oo Boolis ah
21 / 04 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
Degmada Beykoz waxay sameyn doontaa saraakiil
Ogeysiis ayaa waxaa daabacay Dowlada Beykoz. Ogeysiiska la shaaciyey, 50 sarkaal oo booliis ah ayaa lagu qori doonaa ragga iyo dumarka murashaxiinta ah.
Marka loo eego baaxadda degmada Beykoz, in laga shaqeeyo iyada oo la hoos imanayo Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Lambarka 657; Sida ku xusan qodobbada Xeerka Booliska Magaalada, sarkaal booliis ah ayaa lagu shaqaaleysiin doonaa iyada oo loo sii marayo meeleyn furan jagooyinka bannaan ee la cayimay, haddii ay tahay cinwaanka, fasalka, tirada, shahaadooyinka, nooca dhibcaha ee KPSS, dhibcaha saldhigga KPSS iyo shuruudo kale ayaa hoos lagu soo dhigay. Codsiyada qoritaanka askarta booliiska waxay bilaabmi doontaa 1 Juun 2020 waxayna socon doontaa ilaa 10ka Juun.
Shuruuda laga doonayo musharrixiinta u dalban doona qoritaanka sarkaal booliis waa sida soo socota:
a) Inaad tahay muwaadin Turki ah.
t) In aan laga xayuubin xuquuqda dadweynaha.
c) Xitaa haddii muddooyinka ku xusan Qodobka 53aad ee Sharciga Ciqaabta Turkiga ay dhaafeen; Dembiyada ka dhanka ah amniga gobolka, xitaa haddii lagu xukumay xabsi ama cafis sanad ama wax ka badan dambiile ula kac ah, dambiyada ka dhanka ah dastuurka iyo ku shaqeynta amarkan, lunsashada, baadda, laaluushka, xatooyada, musuqmaasuqa, been-abuurka, xadgudubka kalsoonida, khiyaanada. In aan lagu xukumin musalifnimo, been ka sheegis jilicsan, fahmidda waxqabadka, bixinta hantida dambiga ama tahriibinta.
d) Marka la eego heerka militariga ee murashaxiinta ragga ah; kuma lihi wax shaqo ah oo milateri ah ama ma aysan gaarin da'da adeegga milatariga, ama, haddii ay gaartay da'da adeegga milatariga, waxaa loo adeegay adeeg millatari oo firfircoon ama dib loo dhigay ama loo gudbiyey fasalka kaydka.
e) Inuu lahayn jir iyo jirro maskaxeed oo ka horjoogsanaysa inuu si joogto ah u guto waajibaadkiisa.
f) Inuu buuxiyo shuruudaha kale ee codsiyada loogu talagalay jagooyinka lagu dhawaaqay.
a) In la buuxiyo shuruudaha waxbarashadda sida dugsiga ka qalin jabiyay ee cinwaanada lagu dhawaaqay iyo in la helo dhibcaha ugu yar ee KPSS ee lagu cayimay noocyada dhibco ee laga soo iibsan doono Imtixaanka Xulashada Dadweynaha Dadweynaha (KPSS) ee Iskuxirka 2018-KPSSP93 iyo Nooca Undergraduate 2018-KPSSP3 nooca .
t) In aan laga xayuubin hay’adihii dowliga ahaa iyo hay’adihii uu horay u soo shaqeeyay, asluub ​​la’aan awgeed ama asluub ​​awgeed.
c) Si loogu dabaqo shaqaalaha ciidanka booliska si waafaqsan shuruudaha lagu qeexay cutubka (A) ee Qodobka 657aad ee Sharciga Lr. 48, iyo sidoo kale shuruudaha gaarka ah ee ku xusan Qodobka 13 / A ee Xeerka Booliska Magaalada. lagu miisaamay oo lagu cabiray caloosha madhan, cidhiidhi iyo cago cad, dhererkiisu yahay ugu yaraan 1.67 mitir ragga, ugu yaraanna 1.60 mitir dhadig ah oo aan ka badnayn 1 kg (+, -) farqiga u dhexeeya culeyskiisa iyo in ka badan 10 mitir. Go'aaminta dhererka iyo culeyska waxaa dejinaya degmadena.
d) In aan ka weyneyn 30 sano taariikhda imtixaanka.
e) In la haysto ugu yaraan liisanka darawalnimada darawalnimada 'B' oo la soo saaray iyada oo la raacayo qodobbada Sharciga Wadada Wadada Gaarka No 13 ee ku taariikhaysan 10/1983/2918,
Ogeysiiska Qaadashada: Adeegga Mashruuca ee Uskudar Beykoz Nidaamka Tareenka
Ku dhawaaqida hindise: Diyaarinta Mashruuca iyo Dossier-ka (Beykoz Çayırı-Hz.Yüşa…
Uskudar-Beykoz tareenka ayaa imaanaya
Aqoon isweydaarsi ee Beykoz Logistics wuxuu qabanqaabiyaa shirarka Suuq-geynta ee ganacsiga
Line Hill-Beykoz Prairie cable line waxaa la filayaa in ay ogolaato